လမ်းဘေးဆိုင် ၊ လမ်းဘေးကား နဲ့ လမ်းဘေးလူ (၆) /ကသောကမျောနိဂုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » လမ်းဘေးဆိုင် ၊ လမ်းဘေးကား နဲ့ လမ်းဘေးလူ (၆) /ကသောကမျောနိဂုံး
လမ်းဘေးဆိုင် ၊ လမ်းဘေးကား နဲ့ လမ်းဘေးလူ (၆) /ကသောကမျောနိဂုံး
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Jun 13, 2011 in Society & Lifestyle | 13 comments
ဒီခေါင်းစဉ်ကလေးနဲ့ အပိုင်းဆယ်ပိုင်း ဆယ့်နှစ်ပိုင်းလောက် ခွဲပြီးရေးမယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ရေးရင်းနဲ့ပဲ စာရေးသူရော စာဖတ်သူပါ စိတ်ဝင်စားမှု့လဲနည်းလာ…
အခုတလော တရက်ကို ပိုစ့်တင်နှုံးတွေလဲ များလာ…
ဒီရက်ပိုင်းမှာ စည်ပင်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းဝင်ရှင်းလို့ လမ်းဘေးဈေးရောင်းသူတွေ ဒုက္ခရောက်ကုန်တာကြောင့် သူတို့နဲ့တကွ သူတို့ကိုကိုယ်ချင်းစာသူတွေရဲ့ ဒေါသကို ဆွပေးရာလဲမရောက်ချင်လို့…
တခြားဟာတွေထက် MG ရဲ့စာဖတ်သူအများစုဟာ ပညာတတ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်ရင့်သန်သူတွေ၊ အမျှော်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံသူတွေ၊ စိတ်စေတနာမှန်သူတွေ များတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှငြင်းနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြတဲ့နည်းနဲ့ ဆက်ပြီးနှိပ်စက်မနေတော့ပဲ ပြောချင်တာလေးတွေ အတိုဆုံးတက်သုတ်ရိုက် ရရင်……….
လမ်းဘေးဆိုင်တွေရှိလို့ လူများစုဝယ်ခြမ်းဘို့ အဆင်ပြေကြတယ်။
လမ်းဘေးဆိုင်တွေ စည်းကမ်းမဲ့တာကြောင့်ပဲ လူတွေ သွားလာဘို့ အဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်။
လမ်းဘေးဆိုင်တွေ စည်းကမ်းမဲ့တာကြောင့်ပဲ မြို့တော်ကြီးရုပ်ဆိုးရတယ် ။
ဒီတော့ – ပြဿနာအစစ်က လမ်းဘေးဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး ။
အနှေးယာဉ်တွေရှိလို့ လူတွေသွားလာဘို့ အလွန်အဆင်ပြေကြတယ်။
အနှေးယာဉ်တွေ စည်းကမ်းမဲ့လို့ပဲ လူတွေ ကားတွေမှာ ကြီးစွာသော အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြရတယ်။
အနှေးယာဉ်တွေ စည်းကမ်းမဲ့လို့ပဲ လူတွေယာဉ်တွေ အန္တရယ်ဖြစ်ကြရတယ်။
ဒီတော့ – ပြဿနာအစစ်က အနှေးယာဉ် (ဆိုက်ကား/တွန်းလှည်း) မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့ကားတွေ၊ ဘတ်စကားတွေ ကိုအသုံးပြုရလို့ လူတွေ အများကြီးအဆင်ပြေကြတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့ကားတွေ၊ ဘတ်စကားတွေ စည်းကမ်းမဲ့ရပ် စည်းကမ်းမဲ့မောင်းလို့
ယာဉ်အန္တရယ် လမ်းအန္တရယ် တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ မဖြစ်ဖူးထား – အခြားလူတွေ အခြားကားတွေ အခြားအနှေးယာဉ်တွေမှာ နေ့စဉ်ပဲ အနှောက်အယှက်ကြီးစွာဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီတော – ပြဿနာအစစ်က ကား မဟုတ်ပါဘူး။
စည်းကမ်းက ဘယ်လိုစ “ မဲ့ ” သလဲ ?
အဲဒါသိမှ ဒီရောဂါကို –
တွေ့တဲ့နေရာက မြန်မြန်ပြတ်အောင် လွှနဲ့တိုက် ပြီးကုတာမျိုး…၊
တခါထဲပြောင်သွားအောင် ရွှေပေါ်နဲ့ထိုးတာမျိုး မလုပ်ဘဲ၊
အနာနဲ့ဆေး တည့်အောင်ပေးပြီး ကုနိုင်မှာပါ။
ဒီပိုစ့်မှာတော့ စည်းကမ်း စ “ မဲ့ ” ပုံ နှစ်မျိုးပဲတင်ပြဘို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ပထမတမျိုးက ဟိုဟာထောက်ရ ဒီဟာထောက်ရ နဲ့ ချွင်းချက်တွေများလာတာ။
ဥပမာ – ဒီနေရာ ဈေးမရောင်းရ ဆိုပေမယ့်လဲ ဟိုလူကတော့ အင်ဖေါ်မာမို့လို့
ဒီလူကတော့ ဘာကမို့လို့ဆိုပြီး ကိုယ့်စည်းကိုယ်အရင်ဖေါက်ကြတာမျိုး….။
ဒုတိယတမျိုးက – အကိုကြီးနဲ့ ညီလေး တွေ
ဂေါက်ကွင်း စားသောက်ဆိုင် စတာမျိုးမှာဆုံကြရင်း
အိပ်ကပ်ထဲကဖါး(စပွန်ဆာ) ကိုယ်စီထုတ်ပြီး အလှူ့လက်ဘက်နဲ့ မျက်နှာလုပ်ကြရင်းနဲ့
(မှတ်ချက်- အဲသလိုပါဆယ်မှာပါလာရင် ကိုယ်ကလဲ အပြန်အလှန် တောင်းထားတာမို့ သူ့ စောင့်ရှောက်လိုက်ပါကွာ … ဆိုတာလေးက စည်းကမ်းမဲ့လာတဲ့အခါ ဘာမှမပြောသာတော့ဘူး။)
အဲ .. တော်ပါပြီ ။
ဖတ်သူ မန်းသူ အားလုံးကို အမှန်တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စည်းကမ်းမရှိတာကြောင့်ရယ်ကတော့ သေချာပါတယ်..။ဒါကတော့ တပိုင်းပေါ့လေ…။
(အဖြေရှာကြည့်တာတခုအနေနဲ့…) အာမခံစံနစ်အဲဒါတွေအပေါ်မှာ..မရှိလို့ကြောင့်ရယ်လို့.. မတွေးမိဘူးလား..။
လမ်းဘေးဆိုင်တွေဖွင့်ခွင့်ကို ပေးပြီး.. ဆိုင်ရာ မီးအာမခံ..ထိခိုက်မှုအာမခံ..အစာရေစာနဲ့ပါတ်သက်အာမခံ စသဖြင့်ဝယ်ရမယ်လုပ်လိုက်..ပေါ့လေ..။
လူတယောက်က.. ပလက်ဖောင်းပိတ်ရောင်းနေတဲ့လမ်းဘေးဆိုင်ကို ရှောင်ပြီး လမ်းပေါ်တက်လျှောက်လို့..နောက်က..နင်းလာတဲ့ ဆိုက်ကားက ထပ်ရှောင်ရင်း.. လမ်းမအလယ်ဖက်တက်သွားလို့..အရှိန်နဲ့ မောင်းလာတဲ့ သစ်လုံးတင်တဲ့ကားနဲ့ချိပ်မိပြီး.. ထိခိုက်ဒဏ်ရာရာတာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုပါတော့…
တရားရေးက.. ဘယ်သူတွေကို..ဘယ်လို..တရားရေးအရ အနိုင်ပေးလို့….နစ်နာမှုတွေကို.. ငွေကြေး..ဒဏ်ကြေး…လျှော်ခိုင်းမယ် ထင်မိပါသလည်း…။
ဒီစံနစ်မျိုးက.. ယူအက်စ်ကမြို့ တွေလုပ်နေတယ်လို့ တွေ့မိပါတယ်..။
သူတို့လုပ်နေပုံတွေ… အသေးစိတ်တော့ နားမလယ်ပါဘူး..။ ဒါပေမဲ့..အာမခံစံနစ်က..လူတွေစည်းကမ်းရှိလာအောင် တော်တော်ထိန်းကြောင်းနိုင်တဲ့.. ကရိယာတခုလို့တော့မြင်မိတယ်..။
သူကြီးကလည်းတော်တော်ရယ်ရတာပဲ။ ဟာသတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်နဲ့တူတယ်နော်။ အပေါ်ကကိစ္စလိုမျိုးဆို ကားမောင်းလာတဲ့သူကို ထုံးစံအတိုင်း မဆင်မခြင်ယာဉ်မောင်းနှင်မှုနဲ့ ဆွဲမှာပေါ့ဗျ။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အနာသိ ဆေးရှိ မေခလာနဲ့ညှိတဲ့။ မေခလာ ကယ်အောင် စောင့်ရမယ်။
မေခလာ က သီချင်းဆိုတယ်.. ငါ ဘုရင်မ အသည်းများ ဟတ်တတ်ကွဲရမယ်။
ပုရိသ.. အသည်းများ ဟတ်တတ်ကွဲစေမယ်။
တော်ကြတော့ တော်ကြတော့။ ဒီနေရာမှာ သဂျီးလည်း မမှန်ဘူး။ တရားစွဲတယ်ဆိုတာ လွယ်တာမှတ်လို့။ eros လည်း မှားနေတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်ရမယ်။ မတော်လို့ ပုရွက်ဆိတ်အုံ ဒုတ်နဲ့ထိုးမိရင် ဒုက္ခ။
ဟုတ်တယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီက စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင် လမ်းဘေးဆိုင်တွေလည်း စည်ကားနေလည်း ဘာပြဿနာမှရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း စည်းကမ်းသည် လူ့၏တန်ဖိုးဆိုတာ ဖြစ်လာတာပေါ့။ မနေ့ကတော့ မိုးအရမ်းရွာနေတဲ့အချိန် ကားဂိတ်ရောက်တော့ ကားစောင့်ရင် နားဖို့လုပ်ထားတဲ့အမိုးအောက် ၀င်မလို့ လုပ်တော့ ရပ်စရာနေရာမရှိဘူး။ ကားဂိတ်က ကွမ်းယာဆိုင်က နေရာအပြည့်ယူထားတာကိုတော့ လက်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်………..
လမ်းဘေးဆိုင်ကတော့ နေရာတစ်ကာဖြစ်နေပါပြီ..။ တိုးတက်လာတဲ့ လူဦးရေနဲ့ ကျပ်တည်းလာတဲ့စားဝတ်နေရေး ကြောင့်လို့ ပြောရင်ရမယ်နဲ့တူပါတယ်…။ လူတွေဟာအရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲ ကိုယ်အဆင်ပြေရာကိုပဲ ကြည့်လာတဲ့အတွက်လည်းပါပါလိမ့်မယ်..။ ရှေ့ကလူကလုပ်ပြနေတော့လည်းနောက်က လိုက်လုပ်ကြတာပေါ့….။ အနာသေးသေးလေးတုန်းကတည်းက ဆေးထည့်ရမှာ ခုမှတော့ …………. ကိုparlayar46 ရေ……….
အနာသေးသေးလေးတုန်းကတည်းက ဆေးထည့်ရမှာ ခုမှတော့ …………. ငိုမနေနဲ့တော့ ကိုparlayar46 ရေ……….
ဥပမာ.. နယူးယောက်မှာ.. လမ်းဘေးဈေးရောင်းမယ်ဆိုပါတော့..
လိုမယ်ထင်တာတွေ. .အောက်မှာရှာတင်ပေးထားပါတယ်.။ စီးတီး၊ ကောင်တီမှာ..လုပ်သူတွေ..ပိုသိသူတွေဆက်ရေးဖြည့်ပေးကြပါ..။ တခြားနိုင်ငံက.. အတွေ့အကြုံတွေလည်း ရေးပေးကြပါ။
You sell food. Note: Food vending requiresalicense from the Department of Health and Mental Hygiene. Call 311 or visit http://www.nyc.gov/health for information about food cart vendor licenses and permits.
Selling art on the street: The Basics
It is now legal to sell art on the street and in parks throughout NYC. Many other US cities are following NYC’s lead. Want to know the legal basics?
To keep their business legal, street vendors in New York City need documents issued by the city, includingaGeneral Vendor’s License andatax certificate. In theory, the application is fairly straightforward and processing takes aboutamonth. However, the city requires you to get onawaiting list, which is often closed. There are exceptions to the rule, including those made for veterans and their widows or widowers.
1. New York City limits the number of non-food vendor licenses to 853, and food vendor licenses to 3,100. The waiting list currently runs about 25 years and has been closed to new applicants since 1993. Veterans and their survivors do not need to join the waiting list. The general vendor license limit does not apply to those selling written matter, including books and periodicals, or artwork. You don’t needaGeneral Vendor’s License to sell these items on the street.
2. Alternatively, you may rentalicense fromavendor that already possesses one. Vendor permits are leased on an underground market and through classified advertising on sites such as craigslist.org. These permits, however, are invalid in the view of city ordinances, and you may be cited for usingarented license.
3. To vend on the street you will also needaNew York State Sales Tax Certificate of Authority (Form DTF-17), which isaform that authorizes you to collect and pay sales tax on the items you sell. The application form is available at http://www.tax.state.ny.us/pdf/2007/fillin/st/dtf17_407_fill_in.pdf. This isafill-in form that can be filed online; there is no application fee. The normal turnaround time foraCertificate of Authority is four to six weeks.
4. For selling atatemporary flea-market or exhibition, contact the promoter of the event, who must issue temporary permits to the vendors costing $50 to $200. Current New York City promoters include Mort and Ray Productions, Mardi Gras Productions, Hell’s Kitchen Flea Markets, Clearview Festival Productions, and Green Flea. You won’t needatax certificate.
LLCs in3Easy StepsLegalZoom.com/LLC
(1) Sign Up (2) Fill in Online Form (3) Launch Your New Business Today!
Get Tax ID NumberIRS-EIN-Application.com
Business Tax ID quick and easy Have your EIN withinafew minutes!
Free LLC – Pay Fees Onlywww.corporateservicecenter.info
Since 1989. 30,000+ corps formed. Step by Step guidance and support.
Franchises under $10,000Franchise.FranchiseGator.com
If you areaveteran, you must submitaStatement of Service issued by the Veterans Administration office at 245 West Houston Street in Manhattan, oraDD-214 form, which you can obtain from the National Personnel Records Center at http://www.archives.gov/st-louis/military-personnel/standard-form-180.html. Submit the document to New York City Licensing Center, 42 Broadway, Fifth Floor, New York, NY 10004, or fax it to (212) 487-4212.
The city does not requirealicense for those selling on private property.
State law requires you to make the applications at least 20 days, but no more than 90 days, before you begin operations. Don’t open your business before obtaining the necessary documents. You will be subject toacitation andafine levied by the city.
Selling food or vegetables is subject to another set of license requirements, includingaCertificate of Authority and permits from the Department of Health.
Read more: How to GetaNYC Street Vendors License | eHow.com http://www.ehow.com/how_6085318_nyc-street-vendors-license.html#ixzz1PB0do0h7
နယူယောက်မှာလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ လိုင်းကြေးရှိတယ်နော်။ တကမ္ဘာလုံးက လူမျိုးအစုံ စုနေတဲ့မြို့ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့အကျင့်ရော မကောင်းတဲ့စရိုက် အကုန်လုံးရှိတယ်။ ယူအက်စ်မှာ အမေရိကန် မဆန်ဆုံးနေရာ ပြောပါဆိုရင် နယူးယောက်ကို ပြရင်ရမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းတဲ့ စနစ်တွေကောင်းတော့ လက်လွတ်စပယ် ဖြစ်မသွားဘဲ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး မြို့တော်ကြီးတခုအဖြစ် အောင်မြင်ရပ်တည် နေနိုင်တာပေါ့။
“အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းတဲ့ စနစ်တွေကောင်းတော့ လက်လွတ်စပယ် ဖြစ်မသွားဘဲ”
လက်တွေ့အကျဆုံး ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ အဲဒါကိုသဘောပေါက်သင့်တယ်။